Ma dooneysaa inaad imtixaanaadka guul ka gaadho? - Aayaha
Home»ARIMAHA BULSHADA»Ma dooneysaa inaad imtixaanaadka guul ka gaadho?
2. Akhriska horey u billoow…
3. Wixi ahmiyadda u baahan ahmiyadda sii…
Marka qofka akhrisanaya waa inuu ogaadaa habka uu ugu diyaar garoobayo nooca imtixaanka ee sugaya. Sida oo kalana qofka imtixaanka galaya waa inuu ku tala galaa qaabka uu imtixaanka u imanaya inuu yahay qor, dooro, sharrax, iwm…
5. “Akhriskaaga wakhti geli” si aad uga faa’ideysto
“Tijaaba iska qaad” sida ugu wanaagsan oo aad akhriska guul uga gaari kartid isla-markaana wixi aad akhrisataya inaad illaawin gacan ka geysanaya ayaa waxay khubarada dhinaca waxbarashada ku tilmaamaan iney tahay tijaabada uu qofku iska qado.
Taleefanka wuxuu leeyahay faa’idooyin badan marka dhanka wanaagga laga eego balse barnaamijyada baraha bulshada uu xiriirkooda fududeeyo taleefanka gacanta inta badan waxay caqabad ku noqdaan akhriska qofka.
DEG DEG: Bandhig Faneedkii Fanaanka Maxamed BK uu caawa ku qaban lahaa Nairobi oo la joojiyay